Goobaha Khadka Tooska ah ee Iswidhishka - Xeerarka gunnada ee Khadka Tooska ah ee Khadka
(276 votes, celcelis ahaan, 5.00 out of 5)
Loading ... Laga bilaabo Janaayo 2018 dhammaan noocyada khamaarka waa ka sharci Sweden. Kali lahaanshaha goobtan waxaa iska leh shirkadda 'Svenska Spel' ee dowladdu leedahay, oo la aasaasay 1997-kii oo ay ku midoobeen laba shirkadood oo kala ah Penninglotteriet iyo Tipstjänst. Svenska Spel waxay ka shaqeysaa casinos ku saleysan dhulka oo dalka ku yaal, iyo sidoo kale qeybta bakhtiyaa-nasiibka. Sida ku xusan sharciga khamaarka Iswiidhan ee khamaarka waxaad ku ciyaari kartaa ciyaaro sida roulette, craps iyo turubka, mashiinnada ciyaarta, turub. Xuquuqda gaarka ah ee lagu bixinayo dhammaan cayaarahan waxaa iska leh Svenska Spel. Sharci ahaanta, nabadgelyada iyo isku halaynta suuqa khamaarka Sweden ayaa mas'uul ka ah maaraynta khamaarka Iswidhan.
Khamaarista online ee dalka Iswiidan
Ilaa maanta, khamaarka khadka tooska ah ee Iswidhan laguma xukumo. Mulkiyadda dawladdu leedahay ee Svenska Spel waxay xaq u leedahay inay bixiso turub khadka tooska ah iyo khadka tooska ah ee loo yaqaan 'bingo'. Si kastaba ha noqotee, khubarada khamaarka ayaa ku dhawaaqay isbeddelada suurtagalka ah ee sharciga jira ee qamaarka internetka ee Iswidhan, kaas oo u oggolaan doona in la soo bandhigo nidaam ruqsad qaababka kale ee khamaarka internetka.
Liiska ugu sareeya ee 10 Swedish Casino Online Casino
Khamaarista dalka Iswiidan
Safarkayagu maanta waa dal hodan ku ah taariikhda, raaxada iyo kala dambaynta - Iswidhan. CasinoToplists waxay bixisaa si ay u aragto indhaha, waxyaabaha gaarka ah iyo caadooyinka dalkan cajiibka ah. Iyo, dabcan, waxbadan ka baro casinos iyo khamaarka.
Iswidhan - goobta iyo waxoogaa taariikh ah;
waxaa inta badan lagu dhisay magaalooyinka waaweyn sida Sundsvall), Malmö, Göteborg iyo Stockholm, caasimadda dalka;
20 sano + code code.
Shan goobood oo ku yaalla Stockholm oo leh cinwaannada caasimada;
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Iswiidhan iyo dadkiisa.
Goobta Sweden iyo waxoogaa taariikh ah
Iswiidhan waxay ku taal Waqooyiga Yurub qaybaha bariga iyo koonfurta ee Iskandaneefiyanka. Galbeedka wuxuu xuduudo ku dhow yahay Norway, iyo waqooyi-bari - Finland. Laga soo bilaabo Danmark si loo kala saaro Straits Öresund, Kattegat iyo Skagerrak.
Barwaaqo sooranka dalku wuxuu gaadhay qarnigii 17aad, laakiin wuu awoodi waayey inuu sii haysto booskiisa hoggaamineed Dagaalkii Waqooyiga ee Ruushka awgood. Sanadkii 1809, Iswiidhan waxay lumisay qaar ka mid ah dhulalka bariga, waxayna lumisay saamayntii ay ku lahayd waddanka ay deriska yihiin ee Finland. Iswiidhan had iyo jeer waxay garab taagneyd Jarmalka oo taariikhda oo dhan waxay si isdaba joog ah u caawineysay dowladda, oo ay ku jirto waqtigii Dagaalkii Labaad ee Adduunka.
Burburinta iyo khamaarka dalka Iswiidan
Iswiidhishku waa dad wax ku ool ah waxaanan isku dayaa inaan helo dhammaan faa'iidooyinka, ha noqoto dib u warshadaynta qashinka ama dakhliga khamaarka. Dalka gudihiisa waxaad ku ciyaari kartaa madadaalo, laakiin adoo si adag gacanta ugu haya gobolka. Marka 1999, 4 casinos ayaa laga dhisay magaalooyinka ugu waaweyn dalka: Sundsvall (dib loo dhisay dhismaha xarunta) , Malmö , Göteborg iyo caasimada, Stockholm. Kani waa casino ugu weyn waddanka «Casino Cosmopol Stockholm». Waxay dhawaanahan furtay - bishii Maarso 2003 waxaadna ka heli kartaa cinwaanka Kungsgatan 65. Halkan waxaad ka ciyaari kartaa Roulette, iyo sidoo kale Blackjack, Caribbean Stud iyo Baccarat. Tartanka turubka casino waxaa loo qabtaa xilliyo. Kaarka turubka waxaad ku wada ciyaari kartaa labadaba horeyba taleefanka ayaa loogu duubay, oo waxaad ku biiri kartaa maalinta cayaaraha. Soo-booqdeyaasha waxaa la filayaa maalin kasta laga bilaabo 13.00 illaa 5.00 subaxnimo.
Kasiinadu waxay leedahay xaddidaadyo u gaar ah: waa inaad ahaataa 20 ama ka weyn (waxay baari doontaa baasaaboorkaaga halka laga soo galo) labbiskuna waa inuu u hoggaansamo fikradda ah «smart-casual» (smart casual). Fadlan la soco in euro-da guud ahaan aan laga isticmaalin Iswiidhan, waxaa ka shaqeeya lacagteeda - krona Swedish.
- Matxafka Vasa . Cinwaanka Matxafka: Galärvarvsvägen, 14. Tani waa matxaf aan caadi ahayn, iyo markabka oo la keydiyay ilaa qarnigii 17aad. By habka, kaliya ee adduunka. 95% dhammaan naqshadaha la xardhay iyo sawirada waxaa lagu keydiyay qaabkoodii hore. Hadda markabku wuxuu ku jiraa madxaf ujeedo loo dhisay, halkaas oo aad sidoo kale ka daawan karto filim ku saabsan bandhigga (16 luqadood).
- Alfred Nobel Museum . Cinwaanka: Börshuset, Stortorget, Gamla stan. Halkan, sawirrada abaalmarinta abaalmarinta 800 kaliya maahan qurxinta derbiyada, waxayna ku socdaan nooc farsamo nadiifinta qalalan. Tani waa naqshad aad u xiiso badan oo kaliya ma aha inay caawiso in lagu keydiyo meel ku taal matxafka. Laakiin markale waxay xusuusineysaa in matxafku u heellan yahay gaaritaanka sayniska. Waxa kale oo jira tas-hiilaadyo is-dhexgal ah oo dadka waaweyn ee carruurta leh ay ku celin karaan qaar ka mid ah waxyaabihii uu soo helay.
- Matxafka "Skansen". Cinwaanka: Djurgardsslatten 49-51. Booqo Iswiidhan oo dhan dhowr saacadood hawada nadiifka ah? Si fudud! Tan oo dhanna waxaa iska leh matxafka dhaqanka Iswiidhishka "Skansen". Halkan waxaa ku yaal guriga iyo hantida 18-19 qarniyo. Dhulkii ay deganaayeen matxafku farsamayaqaannadu waxay ku mashquulsan yihiin howlahooda maalinlaha ah, waadna daawan kartaa sida kabo-sameeyeyaasha, kuwa wax dubaya iyo kuwa wax afuufa.
- Matxafka "Junibacken". Goobta: Jasiiradda Djurgarden ee Stockholm. Waa madxafka sheekooyinka caanka ah ee Astrid Lindgren iyo janno carruurta iyo dhammaan taageerayaasha shaqadeeda.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Sweden iyo Iswiidhishka
Dalka Iswiidan waxaa ka jira dad ka badan 300,000 oo leh magaca Carlson / Karlsson;
Ardayda da'da ah ee da'da ah - 26 sano;
Waa canshuuro aad u sarreeya - 22% faa'iidada;
Iswidhan gudaheeda waxaa ku yaal “Ice Hotel” - «ICEHOTEL». 200 km woqooyi woqooyiga Arctic Circle ee tuulada Jukkasjarvi waa "baraf aqal" dhab ah. Iyada ayaa dib loo dhisaa sanad walba, maxaa yeelay guga kaliya ee durdurrada ka socda ayaa wali la heli karaa. Halkan waxaad ku lahaan kartaa inaad ku xardho farshaxan ka sameysan baraf, u aado kalluumeysiga barafka, oo aad markhaati u noqoto aurora borealis;
"Snus" - tubaakada jilicsan, la jeexjeexay. Iswidishka waxaa la hoos galiyaa bushimaha kore waxaana loo isticmaalaa meeshii sigaarka caadiga ah;
Cunnooyinka loogu jecel yahay waa keega pizza (hilib, jiis, cajiin iyo suugo gaar ah oo loogu talagalay kebab). Badanaa, guri qoys halkii casho, wuxuu jecel yahay inuu booqdo makhaayadaha u dhow ama silsiladda cuntada degdegga ah;
Iswidishka qarniyada jirsada - rajada nolosha halkan waa in ka badan 80 sano (mid ka mid ah tilmaamayaasha ugu fiican Yurub oo dhan);
Dadka Iswiidhishka ahi waxay ka fikiraan inta badan kheyraadka dalkiisa waxayna tamarta ku bixiyaan si xikmad leh. Tusaale ahaan, magaalada Borås korontada ka soo baxda guriga gubida waxaa loo isticmaalaa in lagu kululeeyo magaalada (60,000 guri, 10% tamarta loo baahan yahay). Mashiinka dharka lagu dhaqo gabi ahaanba maahan - halkan waxaa laga isticmaalay qolka dharka lagu wadaago.
Iswiidhan oo ku taal khariidadda Yurub
0.1 Khamaarista online ee dalka Iswiidan
0.2 Liiska ugu sareeya ee 10 Swedish Casino Online Casino
3 Khamaarista dalka Iswiidan
3.0.1 Goobta Sweden iyo waxoogaa taariikh ah
3.1 Burburinta iyo khamaarka dalka Iswiidan
3.1.1 Soojiidashada Stockholm
3.1.2 Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Sweden iyo Iswiidhishka
3.1.3 Iswiidhan oo ku taal khariidadda Yurub
malaha deebaajiyada koodhadhka codadka ee mile khasnadda ah